चाकडीका रूप « News of Nepal
मुलुकका प्रम शेबदेलाई यसो बधाई दिउँ भनेको त्यहाँ बूढानीलकण्ठ दरबारमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नभएर धरहरा हैरान भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति भएको हिसाबले पहिला कांग्रेस कार्यकर्ताको भीड लागेको त यसले देखेको हो। अहिले त को–को हो, को–को ? ठेकेदार पनि त्यतै, के–के जाति पनि त्यतै।
फूलमाला लिएर चाकडी बजाउन सबै तल्लीन। हैट, के साह्रो जानेका होउ महाशयहरुले ? जान्ने भए त प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक कामकाजी मान्छेबाहेक अरू कसैलाई भेट्नै नहुने हो। तर, उहाँका अहिले सल्लाहकार पनि नियुक्त भइनसकेर होला। जो पनि बधाई दिने निहुँ गरेर जाने अनि के–के हो के–के भन्ने। कमसेकम दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुञ्जेलसम्म म कसैलाई भेट्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु नि।
त्यता पनि चासो देखिएन। उहाँले निर्वाचन गराउन सक्नुभयो भने अहिले घरमा झुम्मिने महाशयहरुको भन्दा बढी सम्मान उहाँलाई देशबासीले दिनेछन्। तर, साइनो लाउँदै जानेहरुको लर्को विचित्रको रहेछ। कतिले त असिग्राम गाविसमा पिताजीले पहिला माले गोरु बेचेको कुरा पनि भन्न बेर छैन। धरहरा वरपर यस्तै कुरा चलिरहेको बेलामा यसलाई भने यस्ता गनथन सुन्न मन लागेन है पाठकवृन्द। हुन्दिउँ न त चाकडी गर्नेलाई केही दिन प्रमले समय दिनुभयो त के बिग्रियो भन्ने यसलाई लागेको है। पाठकवृन्द केही भन्नुहुन्छ कि ?